Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Gedo
Dagaalka intii uu socday, Ciidamada dowaldda iyo kuwa AMISOM waxay meelo dad shacab ah degan yihiin ku tuureen hoobiyeyaal khasaaro geystay.
CEEL-CAAQ, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa maanta weerar culus ku qaadey degmada Ceel-Waaq, ee gobolka Gedo halkaasii ay dagaal culus kula galeen Ciidamada dowladda.
Dadka degaanka ayaa sheegaya inay maqlayeen hubka noocyadiisa kala duwan, oo labada dhinac isku adeegsanayeen, waxaana dagaalka ka dhashay khasaarooyin kala duwan, inkastoo aan tirada la xaqiijin wali.
Ciidamada dowladda ayaa iska difaacay weerarka lagu soo qaadey, waxayna dib u riixeen Al-Shabaab oo dhankeeda khasaaro culus oo gaarey, waxaana xaaladda magaaladda ay tahay mid degan, iyadoo Ciidan DF ay sameynayaan howlgallo.
Al-Shabaab ayaa sare u qaadey weeraradeeda xili dalka marxalad adag ku jiro, oo khilaaf ka taagan yahay doorashadda dalka, oo waqtigii la qaban lahaa ka gudubtay bishan, sidoo kalena Baarlamaanka mudo-xileedkiisa dhamaaday.